Home Wararka Fahad Yasin oo la soo baxay qorshe cusub uu markale Milkiile ku...
Fahad Yasin oo la soo baxay qorshe cusub uu markale Milkiile ku noqonayo
Warar lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay dhisayaan musharrax Xasan Cali Khayre oo u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Villa Somalia ayaa dadaal badan ku bixinaysa taageeridda musharrax Xasan Cali Khayre kadib markii ay yaraatay rajada dib loogu dooran karo madaxweyne Farmaajo.
Fahad Yaasiin ayaa aaminsan in uu mar kale mulkiile ka noqon doono dowladda cusub haddii Xasan Cali Khayre ku guulaysto xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Fahad ayaa lagu tilmaami jiray mulkiilaha dowladda hadda jirta ee Soomaaliya ka hor intaan Ra’iisul wasaare Rooble awood-tirin.
Dhinaca kale weli ma cadda in madaxweyne Farmaajo mar kale u tartami doono xilka madaxweynaha xilli Villa Somalia ay raja xuma ka qaadday doorashadii guddoonka labada ee Baarlamanka dalka.
Previous articleXildhibaan kashifay sida Xildhibaanada soo tahriibay ku galeen Baarlabaanka
Next articleXijaarkii Rooble sheegay inuu shaqada ka ceyriyo oo awoodiisii sare u sii kacday
Abiy Ahmed oo ku dhawaaqay inuu dhammaaday dagaalkii gobolka Tigray